« Conclave » mpiasam-panjakana : nanidy varavarana ny ministra sasany (+vidéos)
Nomelohin’ny « Cellule de crise interministérielle » androany ny fitondran-tenan’ny ministra sasantsasany ao anatin’izao fitondrana izao. Maro tamin’ireto mpiandraikitra departemanta ireto no namerina indray, ary nanamafy mihitsy aza, ny antsojay amin’ireo mpiasam-bahoaka eo ambany fitantananany. Niverina arak’izany ny fanambazana vola ho fampisaraham-bazana, ny fampihorohoroana izay mitarika ny fikatsaham-bahaolana eny hatramin’ny fiverenan’ny « pointage » rahatoa ka tsy nisy mihitsy izany tao anatin’ny telo taona nitondran’ny FATE.
Nanambara moa ny mpandrindra ny vondrona fa « tany tsy ilaozana ity ka mbola hifankahita eto ». Ny ankamaroan’ireo ministra manao be marenina anefa, araka ny fanazavana, dia ireo izay mihevi-tena fa isan’ny nandray anjara tamin’izay lazaina fa tolom-bahoaka saingy tsy mihevitra ny fitakian’ny sendika ho toy ny tolom-bahoaka velively.
Manohana manontolo ny tolon’ny mpampianatra mpanabe manomboka eto ny sendika rehetra ao anatin’ny « cellule de crise » raha ny fanazavan’ny mpandrindra hatrany. Heverin’ny mpikatroka manko fa fomba iray hisorohana ny fiverenan’ny krizy ny fanabeazana mahitsy tsara raisin’ny zanaka Malagasy. Koa hiara-mizaka manomboka izao izany fitakian’ny mpampianatra mpanabe izany ary honome tanana amin’izay mifanandrify aminy ny sendika hafa rehetra. Raha nahomby rahateo ny « conclave » ho an’ny tany amin’ny Faritra dia noho ny fandrindrana nataon’ny SEMPAMA hatrany.
Nankasitraka izany tolo-tanana ataon’ny mpiara-mitolona izany ny SEMPAMA ary nanome toky fa ny hanatsarana ny fanabezana eto Madagasikara no tanjon’izy ireo. Mbola nanamafy ny antso avo ho an’ireo mpanabe sasany eto an-drenivohitra koa anefa ny solotena avy any amin’y Faritra satria fotoana tokony hanambarana ny hery izao fa tsy hanekena ny fampizarazarana. Mandeha indray manko amin’izao fotoana ny fizarana seza ho an’ireo manaiky hilefitra manoloana ny antsojain’ny mpitondra.
« Cellule de crise interministérielle » : hamaha krizy sa hamorona krizy vaovao ? (+vidéo)
Nipoitra tampoka tany anaty torimasony tany ny vondrona mpiasam-panjakana maromaro izay nanangana ny atao hoe « cellule de crise interministérielle ». Raha ny filazan’ireto mpiasam-panjakana ireto dia handrafitra fangatahana iombonana ho an’ny asam-panjakana manontolo izy ireo mba ahafahana manambatra ny hery amin’ny fitakiana izay atao. Androany dia namoaka tetiandro ao amin’ny fiatrehany izany asa izany ireto vondrona ireto ka hisy ny fandiniahana isaky ny ministera ny fitakiana ao anatin’ny telo andro ka hanomboka ny 27 jona hoavy izao izany.
Ahiahy tsy ihavanana ...
Ny tena mampiahiahy dia nosoritan’ity vondrona ity androany fa miaraka amin’izy ireo ny PARAMED sy ny SEMPAMA ary ity farany mihitsy no voalaza fa misahana ny fikarakarana ny « conclave » any amin’ny faritra ivelan’Analamanga. Mampiahiahy io toe-javatra io satria fantatra ny firindran’ny hetsiky ny mpampianatra mpanabe amin’izao fotoana hisakanana ny fanaovana kalahafa ny zanaka Malagasy any amin’ny Faritra izay efa tsy nianatra tao anatin’ny efa-bolana mahery. Toa izay hetsika izay no ezahina hampanginina sy atao izay hampihena ny tanjany. Fantatra tokoa mantsy fa raha taona fotsy ny 2011-2012 dia hitroatra hatramin’ny Ray aman-dRenin’ny mpianatra ka hanafaingana ny firodanan’izao fanjakana izao. Mahavalalanona ihany koa fa dia nanao antso avo hampitsaharana ny fanenjehana ireo mpanabe mitolona any amin’ny Faritra ihany koa ity « cellule de crise » ity. Raha toa ka tsy tafavoaka mantsy ny hetsika ataon’ity vondrona « taitra tampoka » ity dia voatery hiverina hatrany am-boalohany indray ny asan’ny SEMPAMA ary dia hihalefy ny heriny satria hihena ny hafainganana efa azo ankehitriny. Tsy vitan’izany fa dia sahy milaza ny mpandrindra ity vondrona ity fa tsy maintsy mandalo sy ifampierana amin’izy ireo izany manomboka eto ny fitakiana sindikaly rehetra. Rehefa nanontaniana anefa izy ireo raha toa ka mijoro ho rafitra eo ambonin’ny sindika rehetra dia nandà ankolaka.
Mbola ho tsaraina …
Eto am-pamaranana dia adidy angamba ny mampahatsiahy fa tsy tokony hanangana krizy vaovao akory ny hetsika isan-tokony fa hitady ny vahaolana tsy hiverimberenan’ny krizy intsony. Voalaza fa taonjon’ity « cellule » ivondronan’ny mpisam-panjakana sasantsasany ity ny famerenana ny hasin’ny mpiasam-bahoaka saingy rahatoa ka manaiky hampiasain’ny mpitondra ho « mpamono afo » dia mazava fa tokony handinin-tena aloha satria ny toe-tsaina mihitsy no lomorina. Isan’ny notakian’ireto mpandrindra ireto mantsy ny « loyauté » ary raha, sanatriavina ihany, mamadika ny tolon’ny rahalahiny izy ireo dia ho tsarain’ny Malagasy manomboka eto.
Ankolafy RAVALOMANANA : manda miaro ny TIKO (+vidéos)
Niverina an-drenivohitra aloha ireo olom-boatendry nandrindra ny fiarovana ny orinasa TIKO tao Andranomanelatra Antsirabe. Raha ny tatitra nataon’izy ireo tamin’ny mpiara-mitolona dia henjana ihany ny niatrehina ny 12 andro tany an-toerana saingy nahafapo ny fanehoan-kery nataon’ny mpandala ny ara-dalàna ka nampihemotra ny FATE aloha hatreto. Namabaran’ireto delegasioan ireto anefa fa tokony ho vonona hatrany ny zanak’i Dada hanao be midina raha sanatria mbola mikasa hanao amboletra ny ekipan’ny FATE. Namafisin’i Guy Maxime Ralaiseheno ary fa ny firaisan-kina no tena zava-dehibe indrindra ao anatin’ny tolona atrehin’ny Malagasy ary mbola iantsoany ny fahatsiarovan-tenan’ny tsirairay.
« Telo taona nandeferana ny mpiara-dia amin’ny Filoha RAVALOMANANA » hoy Guy Maxime « saingy raha tsy mbola misy vahaolana aorian’ny fihaonana dia hiroso isika ». Nambarany moa fa ny hanafoanana ny zava-bitan’ny Filoha RAVALOMANANA rehetra no eritreretin’ny FATE fa hanadinoan’ny Malagasy ny soa vitany teto Madagasikara. Diso hevitra anefa izy ireo fa vao maika hanamafy ny fififamatoran’ny Filoha amin’ny Malagasy izany. Notsorin’i Guy Maxime Ralaiseheno ihany koa fa « mifandona » amin’izy ireo « izay sahy mikitika ny TIKO eo ».
Valifaty ny ny fanagiazana
« Valifaty tsotra izao » ny fahitan’ny Ankolafy RAVALOMANANA ny fiezahana amin’ny fanagiazana ny TIKO Andranomanelatra. Nambaran’ny praiministra lefitra Botozaza Pierrot fa « tsy afa-misaraka amin’ny fianakaviana RAVALOMANANA ny orinasa TIKO ka izay indrindra no antony tena iezahan’ny mpitondra handringanana azy ». Efa tsy takona afenina intsony mantsy ny fankahalan’ny FATE ny Filoha RAVALOMANANA noho ny tahotra azy amin’ny resaka politika. Ankoatr’izay dia efa diso ratsy saina loatra ny mpanongam-panjakana hany ka miahiahy lalandava ny valifaty avy amin’ilay Filoha voafidim-bahoaka. Ity farany izay tsy mitsahatra ny mamerimberina fa « ny hanarina ny Firenena no maha-maika » ary « tsy mieritreritra ny hanenjika izay nanao ratsy » azy velively ny tenany. Hevirin’ny sasany ho tahaka azy avokoa ny olombelona ka atahorany tsy hitana ny teny nomeny.
Raha ny lafiny teknika indray dia notsorin’i Botozaza Pierrot fa « fanapotehana ny seha-pihariana tsy miankina Malagasy » ny fanagiazana ny TIKO. Hampihena ny risim-pon’ny mpiray tanindrazana hampiasa ny volany eto amintsika mantsy izany fomba ratsy izany. Mahagaga rahateo ny antony mbola anaovana antsojay sy amoahana tarehimarika mihoa-papana nefa fantatra tsotra izao fa rotikin’ny afo ny 90%n’ny vondron’orinasa TIKO noho ny hetsika nataon’i tgv sy ny namany ny 26 janoary 2009. Amin’ny maha-praiministra lefitra misahana ny toe-karena azy rahateo dia manameloka ny famonoana ny orinasa Malagasy toy izao i Botozaza Pierrot. Nambarany rahateo fa andriakitry ny sampan-draharaha tantananany ny miaro ny orinasa teratany.
FOLM : ifotony ny fanombohana (+vidéo)
Miezaka mafy mampandray anjara ny mpiray tanindrazana amin’ny ady hevitra momba ny demokrasia ny « Front des opposants ». Taorian’ny fihaonan’ireo mpiara-miombona antoka amin’ny hetsika izay ataon’izy ireo dia nanapa-kevitra ny hanakaiky kokoa ny vahoaka ny vondron’ny mpanohitra. Ao anatin’izao savorovoro isan-karazany eto amin’ny Firenena izao mantsy dia nambaran’i Lalatiana Ravololomanana izay isan’ny mpandrindra ny FOLM fa « mila resy lahatra tsara amin’ny hasin’izany demokrasia izany ny vahoaka fa tsy terena hanaraka am-bokony fotsiny ». Notsorin’izy ireo anefa fa tsy mety raha tombontson’olon-tokana no voizina sy entina hamahana ny krizy fa foto-kevitra no tokony ijoroan’ny olom-pirenena rehetra ahafahana manangana Firenena na « Nation » vaovao.
Hanomboka rahampitso 20 jiona arak’izany ny fitetezana ny boriborintany enina eto an-drenivohitra ka eny Andavamamba Anatihazo no hisantarana izany. Hibahan-toerana betsaka, araka ny fanazavana, ny fanehoan-kevitra ivoizan’ny vondron’ny mpanohitra ny foto-kevitra ijoroany. Hanaraka hoazy kosa ny famalifaliana ny zanaka Malagasy dimanjato mahery ao anatin’ny boriborintany voalohany amin’izao ankatokin’ny asaramanitry ny 26 jiona izao. Raha arendrina ary no ho zaraina dia efa ho entin’ny vondrona hanabeazana ny kilonga amin’ny fanajana ny demokrasia sahady satria « ny demokrasia no fototry ny fampandrosoana » araka ny teny filamatry ny FOLM.
Antoko MFM : manana andraikitra lehibe ny FFKM manomboka eto (+vidéo)
Rafitra tetezamita vaovao no soso-kevitra naroson’ny antoko MFM hivoahana amin’ny krizy. Fifampitondrana eo ambany fiaraha-mitantan’ireo Filoham-pirenena telo sy i tgv no anatin’ilay rafitra antsoin’izy ireo hoe « Presidium ». Endrika tetezamita toy izay napetraka tamin’ny 1991 kosa no nambaran’ny birao nasionalin’ny MFM fa ahafahana mifampitondra mankany amin’ny fifidianana hankatoavin’ny Malagasy rehetra sy ny fianakaviam-be iraisam-pirenena. Ny anjara asan’ny fahefana mpanao lalàna dia ny handrafitra lalam-panorenana vaovao ary ireo Raiamandreny no hiantsoroka ny fifampihavanana eo amin’ny samy Malagasy.
Am-panahy ihany koa …
« Tsy hatao raharahan’ny mpiantsena ny fitadiavam-bahaolana » hoy Manandafy Rakotonirina. Izay indrindra no mahatonga ny MFM mahita fa ny fandraisana andraikitry ny Filoham-piangonana efatra ao anatin’ny FFKM no hahazahoana tetezamita tena hampilamina fa tsy hitarika krizy vaovao.
Fanehoan-kevitra : « mankaleo » ny fangejana (+vidéo)
Telo taona mahery izao no nanomezana toky ny Malagasy fa fanovana no ho entina eto. Faingana ery tamin’izany fotoana nitokona izay lazaina fa Kianjan’ny demokrasia. Saingy toa nanomboka tamin’ny fotoana nanonganana ny fanjakana ara-dalàna no nahafoana ny fahafahana teto Madagasikara. Manaporofo izany ny nisian’ny olom-pirenena efa maherin’ny zato nigadra noho ny tsy fitovian-kevitra amin’ny mpitondra. Ary mbola misy am-polony rahateo tsy mbola tafavoaka satria ampangain’ny FATE fa manohitohina ny toerany. Ankoatra ny fampanantenana ny fanamorana ny fiainana ara-tsosialin’ny Malagasy dia isan’ny poakaty ihany koa ny toky nomen’ny mpanongam-panjakana ny olom-pirenena.
Isan’ny antony ijoroan’ireo sindika maro manambatra ny heriny amin’izao fotoana ny fahatsapana fa homamiadana animbana ny sain’ny Malagasy rehetra tsy ho sahy mijoro hitroatra manoloana ny tsy rariny no volen’ny mpitondra amin’izao fotoana eto Madagasikara. Anterin’ny olom-pirenena rehetra hatrany fa zo fototra, na eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena aza, ny fahafahana maneho hevitra am-pilaminana. Melohin’ny Hetsika « SAMY LEO » arak’izany ny fanapenam-bava ny Malagasy sy ny fampiasana hery famoretana satria iaraha-manana ny Firenena ka tsy azon’olon-tokana giazana toy ny ampihimamba efa ataony amin’ny harem-pirenena amin’izao fotoana.
Ialana tsiny indrindra ny fahasarotana tamin'ny fampitana ny vaovao noho ny fahatapahan'ny jiro tao anatin'ny 12 ora mahery tamin'ny faritra maro teo an-drenivohitra .
Hetsika « SAMY LEO » : hamarana ny krizy ny hery famokarana (+vidéos)
Tapa-kevitra ny hamondrona ny heriny ireo sindika maro isan-karazany eto Madagasikara. Izany dia mba hitadiavana ny lalana akaiky indrindra ahafahana mamarana izao tetezamita gaboraraka izao. Voasolotena ao anatin’ity hetsika ity avokoa ny sehatra misy ao anatin’ny asam-bahoaka rehetra ary vonona ny hiatrika ny sedra rehetra izy ireo mba ho tombontsoan’ny Malagasy rehetra. Na dia efa iaraha-mahita aza ny anaovan’ny mpitondra ny Firenena dia tsy mitsahatra miantso ny olom-banona hijoro izy ireo satria adidin’ny olom-pirenena rehetra ny mampiaka-peo amin’ny tsy rariny misavovona eto amintsika.
Tsy kabary ambony vavahady fotsiny ny ataon’ireto sindika isan-tokony ireto araka ny fanazavana satria dia efa nijoro nitaky ny zony tsirairay avy izy ireo mialoha izao fanambarana hery izao saingy tsy nahitam-bokany izany. Taorian’izay dingana rehetra izay ary dia nahatsapa ireto mpiasam-bahoaka ireto fa zary vonjy tavan’andro hatrany no ezahin’ny eo amin’ny fitondrana hamahana izay olana mitranga rehetra. Nomarihin’izy ireo ihany koa fa rehefa vondron’olona atahoran’ny mpitondra fa mety hanohitohina ny toerany no mihetsika dia roa andro raha be indrindra no amahany ny fitakiana ataon’izy ireo. Ohatra amin’izany ny hetsika nataon’ireo miaramila teny amin’ny CAPSAT izay nampikoropaka ny tao Ambohitsorohitra mihitsy ary dia nahitana vahaolana tao anatin’ny fotoana fohy satria « manam-basy ». Raisin’ny hetsika « SAMY LEO » ho fanaovana zinona ireo rehetra tena mifofotra amin’ny fampandehanana ny raharaham-panjakana izany ary melohin’izy ireo tanteraka.
Firenena tan-dalàna …
Tanjon’izao hetsika izao ny hamerina indray ny maha-tan-dalàna ny fifampitondrana eto Madagasikara. Nijoro vavolombelona amin’ny fandikan-dalàna ao anatin’ny fitantanana ny avy amin’ny Banky Foiben’i Madagasikara. Nambaran’ny solotenan’izy ireo fa isan’ny sehatra saro-pady indrindra ny misy azy ireo ary tsapan’ny mpandraharaha ao rehetra izany ka nahatonga azy ireo nampiaka-peo nanohitra izay fikasan-dratsy tadiavin’ny sasany hatao amin’ny tahirim-bolantsika. Indroa miantaona no efa naneho fahavonona ny handika ny fenitra mikasika ny asan’ny BCM ny fitondrana ary ny fanoherana izany dia novidian’ny mpitarika ny mpiasa lafo. « Tonga hatrany amin’ny fampiatoana amin’ny asa ny sandan’ny fijoroana amin’ny fahamarinana » hoy ny avy ao amin’ny BCM saingy mbola nanome toky izy ireo fa « tsy fotoanan’ny fihemorana velively akory izao ».
Noho ny amin’ny fahamarinana …
Manotrona sady mipetraka ho loharanon-tolo-kevitra ao anatin’izao hetsika izao ihany koa ny HMF. Araka ny fanazavana nentin’ny Pastera Ramamonjisoa Philibert dia « ny hampanjakana ny fahamarinana no tanjon’ny Hetsiky ny Mpitondra Fivavahana koa dia vonona hatrany izy ireo hiara-dalana amin’izay mitovy tanjona aminy ». Ny HMF rahateo dia efa niantso ny fijoroan’ny Malagasy rehetra hanameloka sy hanohitra ny tsy fahamarinana izay ampanjakana eto amin’ny Firenena. Notsorin’ny mpitandrina Ramamonjisoa Philibert ihany koa fa diso ny filazana fa « sitrak’Andriamanitra izao matoa tanteraka » ary «tsy tokony hino an’Andriamanitra izay rehetra mieritreritra toy izany satria ny Ray tsy maniry ratsy ho an’ny zanany velively ».